Dibad baxyada madax banaanida Biafra oo dad u dhinteen - BBC News Somali
Dibad baxyada madax banaanida Biafra oo dad u dhinteen
Image caption Biafra dibad baxyo dad ku dhinteen ayaa ka dhacay
Ugu yaraan todobo ruux ayaa ku dhimatay magaalada Asaba ee dalka Nigeria intii ay socdeen isku dhacyo dhex maray qolyaha taageersan gooni goosashada Biafra iyo booliiska, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP.
Shan shacab ah iyo labo booliis ah ayaa dhintay kaddib markii ay rabashado ka dhasheen dibad baxyo lagu dalbanayay madax banaanida Biafra sida ay sheegeen booliiska Delta State.
In kabadan hal milyan oo ruux ayaa ku dhimatay dagaal sokeeyo oo dhacay intii u dhaxaysay 1967 ilaa 1970 markaas oo millatarigu u dagaalamay in bariga dalkuu uusan gu’in oo Biafra aysan madax banaanaanin.
Xubnaha dhaqdhaqaaqa Biafra oo dal madaxbanaan ah ama MASSOB ayaa warbaahinta u sheegay in tirada uu booliisku sheegay ay intaas ka badantahay.
Dadka asalka u lahaa Biafra iyo kooxaha kale ee gooni ugoosadka raba ayaa iyagana Isniintii qabtay mudaaharaad markaas oo ku beegnayd markii Biafra ay ku dhawaaqday xornimada 1967.
Waxaa jira kacdoon cusub oo lagu taageerayo ol’olaha lagu doonayo dal madax banaan.